Anisany fepetra ihany koa ny hoe : tsy maintsy atao « virement bancaire », nefa ny mpiara-miasa sasany amin’ireo mpikambana CFM dia any amin’ny toerana tsy misy banky no misy ny ankamaroany.
Niezaka namaha vonjimaika ny olana ny Birao maharitra nampian'ny mpikambana tsotra. Siosion-dresaka no andrenesana fa efa any amin’ny Tahirimbolam-panjakana ny vola saingy tsy mbola nisy ny « virement » hatreto.
Betsaka no efa mandry fotsy, vokatr’io fahataran’ny karama sy tambinkarama io, ka anaovan’ireo mpiasa sy mpikambana ao amin’ity andrimpanjakana ity antso avo amin’ny governemanta hamaha ny olana.
Marihina fa manana « Assistants permanents » roa ny mpikambana tsotra ao amin’ny CFM, ary « Assistants non permanents » efatra.